Ukutya kwaManzi-Ukuphulukana ne-5 kg ​​ngaphandle koxinzelelo-kulula kwaye kulula
Ukutya kwamanzi okanye ukutya kwamanzi yeyona nto ilula kuzo zonke iindlela zokunciphisa umzimba. Nangona kunzima ukuyibiza njengokutya kwakhe, kuba kukubuyiselwa kokutya okuqhelekileyo kunye nemisebenzi eyongezelelweyo ngoncedo lwamanzi.
Zimbini iintlobo zokutolikwa kwendlela otya ngayo amanzi - elula kwaye engqongqo ngakumbi. Ngokuhambelana, ukunciphisa umzimba kunye nokuqina kuyaqapheleka, ngokutsho kwabo bazamile, kunendlela elula yokutya amanzi.
Ukutya okulula kwamanzi akuthethi nakuphi na ukuthintelwa ekutyeni, oko kukuthi, utya ngokuchanekileyo kanye njengangaphambili, kuphela usela amanzi ngokwenkqubo ethile-yiyo yonke iresiphi.
Le nkqubo ibandakanya ukusela ubuncinci iilitha ezi-2 zamanzi acocekileyo ngosuku. Ubalo oluchanekileyo lobungakanani bamanzi emzimbeni wakho ngokutya kwamanzi lubalwa kusetyenziswa ifomula: Ubunzima / ama-20, oko kukuthi, ukuba unobunzima obungama-70 kg, idosi yamanzi oyifunayo kwisidlo yi-3 yeelitha ngosuku. Kodwa amanzi akufuneki aselwe nanini na.
Sisela amanzi ngokuchanekileyo
Qiniseka ukuba usele iglasi yamanzi kubushushu begumbi imizuzu engama-25 ngaphambi kokutya. Ngexesha nasemva kwesidlo, amanzi kunye nolunye ulwelo (ijusi, iti, ikhompiyutha, njl. Kwaye ukungenisa okulandelayo kwamanzi kufuneka kube ziiyure eziyi-1, 5 emva kokutya. Akukhuthazwa ukuba utye kakhulu emva kwe-6, kodwa kungcono ukusela amanye amanzi kwinqanaba elibaliweyo, ungaseli emini.
Ezinye iintlobo zeziselo ezingamanzi kunye neesuphu azifakwanga kubalo.
Isiqhelo samanzi ngokuchanekileyo sisixa esifunekayo samanzi acocekileyo, angenakarbon, kunye namanzi angenaminerali ngaphandle kwezongezo. Kufanelekile ukukhetha nokuba yeyiphi na amanzi asebhotileni okanye acociweyo, kuba amanzi etephu aya kungcolisa umzimba wakho kuphela.
Eyona nto iphambili kule ndlela ilele kwinyani yokuba asikhe sisele umyinge wamanzi emzimbeni, kwaye iingqondo zethu zihlala "zidibanisa" umnqweno wokusela kunye nomnqweno wokutya kwaye sinesidlo endaweni yeglasi yamanzi .
Ukwala ukusela ukutya, sivumela ukutya ukuba kugaywe kwimeko yendalo ngumzimba - ngoncedo lwejusi yesisu, ngaphandle kokukuxuba ngamanzi.
Ukuba sisela ijusi okanye iti, emva koko silungiselela ukuvundiswa kokutya esiswini, esikhokelela ekunciphiseni kokucola kunye nokonakala kokutya, kungoko ukuqokelelwa kwezinto eziyingozi, iityhefu kunye nobunzima obugqithisileyo. Amanzi ngesixa esifunekayo acoca amathumbu ethu, enza ukuba iiseli zizihlaziye ngexesha.
Iziphumo zokuphulukana nobunzima emanzini
Emva kokutya, kuya kufuneka uzive ukuba ulusu luhlaziyekile kwaye lucacile. Ukutya okunjalo kunokusetyenziselwa iiveki ezi-3-4, kwaye ifuthe lazo kufuneka libe yi-2-3 kg yesisindo ngeveki.
Kodwa akukho lula njengoko kubonakala ngathi ikhupha ikomityi yekofu emva kwesidlo sakusasa okanye iglasi yesiselo ngexesha lesidlo sasemini. Ekuqaleni, unokuba unxaniwe ngokukhawuleza emva kwesidlo.
Ukoyisa le nxano amatyeli ambalwa, kufanele ukuba ibe ngumkhwa kwaye akuyi kuba nzima kuwe. Ungasela iti eluhlaza okanye ikofu phakathi kokutya, kodwa ezi zinto azizukubaleka kwimfuno yakho yemihla ngemihla yamanzi.
Ukutya okuntsonkothileyo nobunzima kukudibanisa ukusela amanzi amaninzi, kunye nokuthintelwa kukutya (ukuya kuthi ga kwiilitha ezi-5 ngosuku).
Awunakho ukuhlala ekutyeni okunjalo ngaphezulu kweveki, kodwa izisa iziphumo ezibonakalayo njengokutya kokunciphisa umzimba. Usasela amanzi acocekileyo, kodwa kwangaxeshanye unike ukutya okuswiti, okunetyuwa kunye nokutya okunesitatshi.
Yintoni onokuyenza kwaye kufuneka uyidle ekutyeni kwamanzi
I-Cottage cheese, i-kefir, ii-apula, imifuno kunye nemifuno, i-yolk yeqanda, i-buckwheat, intlanzi engacacanga kunye nokutya kwaselwandle-konke oku kuyinxalenye encinci yemini, nangaphandle kokusela nokusela amanzi kwimizuzu engama-25 ngaphambi kokutya.
Zonke ezi mveliso zineekhalori ezisezantsi, kodwa ziqulathe iivithamini kunye nezinto ezincinci eziyimfuneko emzimbeni, ethi "ihlanjwe" emzimbeni ngexesha lokutya okungqongqo kwamanzi.
Kwangelo xesha, kufuneka ukuba usele iivithamini okanye iivithamini + iiminerali kwizakhiwo ezahlukeneyo kunye nezendalo (ngokukhethekileyo i-homeopathic) amayeza okuxhasa isibindi, kuba utshintsho lwendlela yokutya engqongqo iya kuba noxinzelelo kuyo.
Olu hlobo lokutya luya kukunceda ulahle i-5-7 kg ngeveki, umzekelo, ukuba useholideyini kungekudala, kwaye inani lakho "alikulungelanga" ukubhukuda.
Ngaba ukutya kwamanzi kunokudityaniswa nezinye iintlobo zokutya?
Lo mbuzo uxhomekeke kumntu wonke, kuba xa izidlo ezimbini ezingqongqo zidityanisiwe, umzimba uya kuvezwa kuxinzelelo olukhulu, olunokukhokelela ekubeni unganciphisi ubunzima, kodwa kukugula.
Khumbula ukuba nangayo nayiphi na indlela yokutya, kufuneka uzalise umzimba ngexabiso elincinci elivumelekileyo leevithamini, iiminerali kunye nezinto ezilandelwayo eziya kuvumela ukuba zisebenze ngokwesiqhelo kwaye zinganiki kuphela iziphumo ngohlobo lokwehla kobunzima.
Edlulileyo Usebenza njani ukunciphisa umzimba?
Okulandelayo Ukutya kwaseBrazil-ukunciphisa umzimba ngokulula
Imibuzo ye-58 kwiziko ledatha eliveliswe kwimizuzwana ye-4,614.